Daawo: Maamulka aan la aqoonsaneyn ee soomaliland oo ku dhawaaqday in dowladda qadar ay xiriirka u jartay | Kismaayo24 News Agency
Saturday June 10, 2017 - 5:40 under Somali News by Tifaftiraha K24
Somaliland ayaa sheegtey in ay si buuxda u taageereyso go’aanka Sucuudiga iyo Imaaraadku ka qaateen Qatar ee ah cunno qabateyn dhankasta ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa saxaafadda u akhriyey go’aanka ka soo baxay shirkii golaha Wasiirada ee Somaliland. waxaana kamid ahaa qodobada:
In Somaliland si buuxda u taageerto mawqifka iyo aragtida ay ka qaateen Sacuudiga iyo Imaaraadku khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya iyaga iyo Dalka Qadar.
Laga bilaabo maanta cid aan ogolaansho ka haysan Somalialnd ma isticmaali karaan, mana mari karaan hawada Jamhuuriyadda Somaliland.
Somaliland way u madax-banaan tahay cirkeeda , dhulkeeda iyo baddeedaba, Soomaaliyana kama taliso, mana bixin karto ogolaansho cidi ku isticmaasho cirka, dhulka iyo badda Jamhuuriyadda Somaliland.
Ma jiro xiriir diblomaasiyadeed oo Qatar iyo Somaliland ka dhexeeya, oo aan ka ahayn kan ka dhexeeya Soomaaliya. Somaliland waxaa caalamku u aqoonsan yahay in ay kamid yihiin Soomaaliya, inkasta oo ay jiraan dalal la tacaamula iyada oo mararka qaar loo marayo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Dalka Imaaraadka Carabta oo kamid ah dalka ugu adag ee ka soo horjeeda Qatar ayaa maalgelin ku leh Somaliland, waxayna la wareegeen Dekadda Berbera, sidoo kale waxaa jira heshiis dhigaya in Saldhig Milteri ay ka samaysanayaan Berbera, heshiiskaas oo la aaminan yahay in ay oggolaatey Dowladii Xasan Sheekh.
Tageerada Somaliland ugu baaqdey Isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka ee ay ku go’doominayaan Qatar ayaa la aaminsan yahay in uu yahay mid ay uga faa’ideysanayaan arrimo dhaqaale.
Jaaliyad aad u badan oo Somaliland ka soo jeeda ayaa dalka Qatar deganaa sanooyin ka badan 40 sano, kuwaas oo ka qayb-qaatey dib u dhiska Somaliland.
Soomaaliya ayaa diidey in ay dhinac raacdo khilaafka taagan, Hawada Soomaaliya waxaa si kabadan sidii hore u isticmaasha Diyaarada Qatar Airways, waxaana maamulkeeda wax laga weydiiyaa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Sawirka hoose waxaan ka qaadney Radar Flights oo ah website si Live ah aad ugala socon kartid taraafika duulimaadyada, Diyaaradda Qatar Airways ee ka soo kacdey Tansaniya, waxa ay dul mareysey markii aan warkan qoreyney Somaliland (Waqooyi Galbeed, Somaaliya).